▷ Kalsoonida macaamiishu waxay ka bilaabataa daryeelka dhibaatada macaamiisha - 【 TechRadar 】 2022
Sannado ka hor, waxaan ku dhex socday meel baabuurta la dhigto oo ku taal Mountain View, California, markii aan ku dhex orday Scott Cook, aasaasaha Intuit, shirkadda software ee loo yaqaan barnaamijyada maaliyadeed ee guuleysta sida Quicken, QuickBooks, iyo TurboTax.
Markii aan si kooban u hadalnay, waxaan sheegay inaan ahay isticmaale Quicken. Cook ayaa indhihiisa isku soo koobay markii uu xaggayga u tiirsaday. "Dhab ahaan?" ayuu yidhi. "Maxaa la hagaajin karaa?"
In ka badan labaatan sano ayaa ka soo wareegay kulankaas, laakiin beddelka ayaa had iyo jeer ila joogi jiray.
Waayo-aragnimadayda, maamulayaasha tikniyoolajiyaddu waxay ku fiican yihiin inay kuu sheegaan waxa ay shirkadahooda si sax ah u sameynayaan, laakiin aan aad u jeclayn inay weydiiyaan jawaab celin.
Intii lagu guda jiray dhismaha ganacsi ku dhow 10 bilyan oo Yuuro in ka badan 39 sano, Intuit waxay kasbatay sumcad "macmiil-macaamiisha", markaa markaan fursad u helay inaan la kulmo Nhung Ho, Madaxweyne kuxigeenka Sirdoonka Artificial, fursad u qaado. si aad u ogaato sida waswaaskani u ciyaaro nolosha dhabta ah.
Ho wuxuu ku biiray shirkadda 2014, wax yar ka dib markii uu Ph.D. ku qaatay cilmiga cilmiga hawada Yale. Intii uu waxbarashada ku jiray, waxa uu qaatay barnaamijka maamulka maaliyadda ee Intuit's Mint.
"Waan jeclaaday, laakiin waxaa jiray waxyaabo badan oo aanan jeclayn," ayuu yidhi. "Waa maxay sababta aan u noqon waayay mid caqli badan?"
Markii ay weydiiyeen cilmi-baarayaasha Intuit sababta uu halkaas shaqo uga dalbanayo, wuxuu si bareer ah ugu jawaabay, "Waan necbahay Mint." Sidaa darteed waxaa loo soo kiraystay in ay u timaado oo ay ka dhigto mid caqli badan.
Tan iyo markaas, Ho waxa ay ka shaqaynaysay habab lagu dhexgelin karo AI labadaba waayo-aragnimada macaamiisha iyo habka horumariyayaashu u doortaan sifooyinka gala alaabta.
Qayb weyn oo ka mid ah geeddi-socodku waa indho-indheyn.
Sahanka alaabta ayaa soo saara malaayiin jawaabo ah, shirkadduna waxay abuurtay algorithms si ay u falanqeyso oo ay u raadiso qaabab tilmaamaya meelaha dhibka leh. Soo gudbinta adeeg-sida-a-adeegga ah waxay siinaysaa naqshadeeyayaasha raaxada ay ku eegayaan garbaha macaamiisha si ay u arkaan astaamaha ay isticmaalayaan iyo sida.
"Waxaan maqalnaa macaamiisha oo sheegaya inay jecel yihiin muuqaal, laakiin waxa ay sameeyaan maalin kasta aad ayay u kala duwanaan karaan," ayuu yidhi Ho.
Dhaqanka Intuit wuxuu isku daraa fikirka naqshadeynta iyo "jacaylka dhibaatada, ma aha xalka," ayuu yidhi Ho.
Marka sifooyin cusub la qeexo, "waxaan la xiriirineynaa macaamiisha oo aan la hadalnaa, labadaba macaamiisha haysta iyo kuwa aan haysan." Waxa kale oo jira meel loogu yeedho waxa Ho ugu yeedho "leaps of faith," kuwaas oo ah xalal aanay macaamiishu si gaar ah u codsan.
naqshadeynta lagu farxo
Horumarinta Software-ka ee Intuit had iyo jeer waxay ku lug leedahay waxa shirkadu ugu yeerto "naqshad madadaalo" marxalad halkaas oo tusaalayaal lagu soo saaro laguna tijaabiyo macaamiisha.
Kooxaha naqshadeynta waxaa ku jira dad khibrad u leh habka cilmi-baarista. Kadib, ka amaahashada cilmi-baarista akadeemiyadeed, mala-awaal ayaa loo sameeyay sifo kasta oo cusub waxaana lagu tijaabiyaa muunad macaamiisha ah, beddelidda isku dhafka si joogto ah si aan loo soo bandhigin eex.
Xalka waxaa lagu dhisay si fudud sida mabda'a hagaya.
"Waxaan had iyo jeer dhisnaa qaabka ugu fudud ee suurtogalka ah bilowga si aan u xaqiijino inuu jiro 'jira'," ayuu yidhi Ho. "Waxaan si degdeg ah u ururinnay dhowr qof si aan u aragno inay faa'iido u leedahay iyaga."
Naqshadeynta fududeynta waxay caqabad ku noqon kartaa horumariyeyaasha kuwaas oo u janjeera in ay kala hormariyaan shaqada qaab ahaan.
"Haddii dadku yiraahdaan waxay abuureen qaabka ugu habboon, waxaan hubineynaa inay ka fikireen dhibaatada ay xallinayaan iyo sida ay u cabbiri lahaayeen guusha," ayuu yiri Ho. "Ma aha oo kaliya sida ay u wanaagsan tahay tignoolajiyadaadu."
Jawaab celinta macaamiishu waxay noqon kartaa hubin dhab ah.
Ho waxay xasuusataa tijaabinta muuqaal horumariyayaal abuuray laba sano ka hor taasoo u ogolaatay macaamiisha ganacsiga yar yar inay saadaaliyaan sanadka soo socda si ay uga caawiyaan inay maareeyaan miisaaniyada iyo shaqaalaynta.
"Markii aan u soo bandhignay macaamiisha, waxay sheegeen inaysan u baahnayn sanad saadaalin; saddex bilood way fiicnayd,” ayuu yidhi Ho. "Sidoo kale uma baahneen heerka granularity ee aan siinay iyaga. Naxdin ayay ku ahayd kooxdayada.
Markaad ku darto muuqaal TurboTax oo ku xidha macaamiisha khubarada cashuuraha, fudaydka ayaa sidoo kale guulaystay.
Tijaabadu waxay daaha ka qaaday in qaanuunka fudud (macaamilka iyo khabiirka cashuuraha ay isku gobol ku sugnaayeen) uu si la mid ah waxtar u lahaa samaynta ciyaarta sida algorithm kakan.
"Waxaad si xad dhaaf ah u hagaajin kartaa sabab la'aan," ayuu yidhi Ho.
Intuit waxay kobcisaa waalwalka macaamiisha laga bilaabo maalinta koowaad.
Shaqaale kasta oo cusub waxa uu helaa tababar ku saabsan hal-abuurnimada diirada saaraysa macmiilka iyo naqshadaynta madadaalada, oo leh koorasyo ​​dib-u-cusboonaysiin ah oo had iyo jeer la heli karo. Intaa waxaa dheer, maareeyayaasha ayaa mas'uul ka ah buundooyinka ku qanacsanaanta macaamiisha.
Isagoo jira 71, aasaasaha Cook waa bilyaneer waana mid ka mid ah ganacsatada ugu guulaha badan Silicon Valley. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku hayaa joogitaanka maalinlaha ah ee Intuit, halkaas oo uu diyaar u yahay 24/7 fadhiyada xalinta dhibaatada shaqaalaha.
"Qof walba waxa uu ka soo baxaa tamar aad u saraysa marka uu la fadhiyo Scott," ayuu yidhi Ho.
Waxba lama yaabin.